उखेलेको मुला | Nagarik News - Nepal Republic Media
मेरो साथीको श्रीमती मरेको सातौं दिन भएथ्यो । उसको ३० वर्षे छोरो कोरामा थियो । म भेट्न गएथें । समवेदनाका दुई औपचारिक शब्द भनेंथें ।
त्यहाँ जम्मा भएका मान्छेहरू उसको बिहेका बारेमा चर्चा गर्दै थिए ः
– राधाकृष्णेकी बहिनी बूढीकन्ने बसेकी छे, त्यही बिहे गरिदिनुपर्छ ।
अर्को थप्दै थियो ः होइन अलि गतिली नै पाइन्छ नि, त्यो बूढीकन्ने किन सोहोर्नु हौ । बरु डल्लेकी छोरी २५ वर्षकी भई । बिहे भएको छैन । त्यही बिहे गरिदिनुपर्छ । त्यो गरीबकी छोरीले धनमाथि राज गर्छे बरु ।
ऊ त्यो कुरा मजाले सुनिरहेको थियो । आमा गुमाएकी छोरी भने कुना पसेर विह्वल भएर रुँदै थिई ।
उसको ६० वर्षे जन्म दिन मनाएको दुई महिना मात्र भएथ्यो । म दिक्दारी भावले घर फर्केथें । मनमा लागिरहेथ्यो ः छ्या, यी लोग्ने मान्छेहरू कस्ता पापी, कस्ता निर्मोही ।
म गाउँको घर गएथें । यही सर्कामा कान्दाइको घर गएँथें । उनको श्रीमती बितेको पनि एक वर्ष नाघिसकेथ्यो । समवेदनाको औपचारिकता बाँकी थियो । म कान्दाइको घरमा पुग्दा घरका अरू कोही थिएनन् । कान्दाइ ओसारीमा झोक्य्राएर बसेकाथे । नीरव शान्ति थियो ।
मैले उनलाई सोधेंथें ः सञ्चै छ कान्दाइ ?
उनले मलाई विस्फारित नेत्रले हेरेथे र ग्वाँग्वाँ रुन थालेथे । भक्कानिदै उनी भन्न थालेथे ः
–कालले मलाई किन लगेन । बाटाघाटा, घरओछ्यान सबै रित्ता छन् । ऊ थिई र पो म थिएँ । म त बाह्र आना मरिसकेको छु बाबु । म त उखेलेको मुला त हो । उखेलेको मुलाको के हालखबर हुन्छ र बाबु ?
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ११:३५ शनिबार